ထိပ်တန်း5စပျစ်ရည်ကိုဥရောပခုနှစ်တွင်မြို့နှင့်မည်သို့ရှိပါ Get မှ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း5စပျစ်ရည်ကိုဥရောပခုနှစ်တွင်မြို့နှင့်မည်သို့ရှိပါ Get မှ
တိုင်းစစ်မှန်တဲ့စပျစ်ရည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများတတ်နိုင်နှင့်အံ့သြဖွယ်သောစပျစ်ရည်ကိုပူဇော်သိတယ်. မှ အီတလီနိုင်ငံမှပြင်သစ်, နောက်ထပ်, အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝိုင်ရှိသည်ဖို့အများကြီးအားဖြင့်ဖော်ထုတ်နေကြ.
စိတျအပိုငျးမှာတော့, ဒီစံပြရာသီဥတုကြီးထွားလာအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်နေဆဲအနေနဲ့အနုပညာရဲ့. လူတိုင်းမအရှိဆုံးအရသာဝိုင်အောင်ဘယ်လိုသိတယ်.
စပျစ်ရည်ကိုချစ်သူများသူတို့အတွက်အမြစ်တွယ်နေကြသည်အဖြစ်အချို့နေရာများတွင်ရထားရောက်ရှိဖို့နည်းနည်းခဲယဉ်းသိရ ကျေးလက်. ကျေးဇူးတင်စရာ, အနောက်ဥရောပ နေဆဲသင်သည်ဥရောပအကောင်းဆုံးဝိုင်ကိုဆက်ကပ်နိုင်သောအများအပြားမြို့ကြီးများရှိပါတယ်. Plus အား, သူတို့ကိုသင်ရမယ့်လမ်းကိုရှာတွေ့အတွက်ဒုက္ခမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဤအရာအားလုံးဖြစ်သကဲ့သို့ ရထားသုံးစွဲနိုင်. သင့်စတင်အမှတ်ဥရောပအတွက်အဓိကနိုင်ငံများတွင်မဆိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျလှယျကူသောအချိန်ရှိရတဲ့ရှိသည်လိမ့်မယ်.
ကံမကောင်းစွာပဲလူတိုင်းကိုမသိရ, ဂျာမနီရှိရိုင်းမြစ်ချိုင့်နှင့်ပြည့်စုံသည် အရည်အသွေးအစပျစ်ဥယျာဉ်. သူတို့ကဂျာမဏီ၏အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဝိုင်ထုတ်လုပ်, သူတို့ကိုအများစု Koblenz ရောက်ရှိ.
ဒီအသေးငယ်တဲ့မြို့ မြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည် ရိုင်းနှင့်ဒေသတွင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစပျစ်ရည်ကိုအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်အချို့ကမ်းလှမ်း. ဒါဟာအထူးသဖြင့်လှပ, ထိုဒေသတွင်တခြားပိုကြီးတဲ့မြို့ကြီးများမကြိုက်ဘူး.
ယင်းဒေသ၏စပျစ်ဥယျာဉ်များမှာ ကျြောစောသော ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Riesling စပျစ်ရည်ကိုရှိခြင်းများအတွက်. သင် Koblenz ၏သာယာလှပမြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျခမျြးအေးဝိုင်ဖြူတစ်ခွက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကြိုးစားကြရပါလိမ့်မယ်.
Koblenz မှရယူခြင်းအတော်လေးလွယ်ကူသည်, ကလူအပေါင်းတို့သည်ရိုင်းချိုင့်သောစပျစ်ရည်မြို့ကြီးများရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာများထဲကတစ်ခုရှိပါတယ်အဖြစ်. ဒါဟာတစ်ဝက်နှစ်ခုအဓိကဂျာမန်မြို့ကြီးများအကြားမယ့် - Cologne နှင့် Frankfurt, နှင့် အစာရှောင်ခြင်းရထား Koblenz သွားဖို့ရှိပါတယ် နှစ်ဦးစလုံးထံမှ. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, မြို့ပေါ်တွင်တည်ရှိသည် ရိုင်းချိုင့်သာယာလှပမီးရထားလမ်းကြောင်းမကြာခဏ.
အဆုံးမှာ, မြို့နယ်သာလန်နှင့်အတူနယ်စပ်မှအတော်လေးနီးစပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, လူဇင်ဘတ်, နှင့်ပြင်သစ်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အဖြစ်ကောင်းစွာအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်သောဤနိုင်ငံများကနေရထားရှာဖွေမတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်.
လူဇင်ဘတ် Koblenz မှရထား
ဗီယင်နာရုံတှငျနထေိုငျဖို့အကောင်းဆုံးမြို့တို့တွင်မဟုတ်ပါဘူး; ဒါကြောင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးစပျစ်ရည်ကိုမြို့တို့တွင်လည်းဖွင့်. တိုင်းပြည်ယေဘုယျအားဖြင့်စပျစ်ရည်ကိုအများကြီးထုတ်လုပ်, အဆိုပါညုချိုင့်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင်စပျစ်ဥယျာဉ်ထဲကနေဖြစ်ပါတယ်အရှိဆုံးအရာ၏. ဗီယင်နာသူ့ဟာသူတမြို့အတွင်းစပျစ်ရည်ကိုထုတ်လုပ်သောအနည်းငယ်ကမ္ဘာကြီးမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တယ်.
ကြောင်းအားလုံးသင်သည်ပူဇော်ဖို့တိုင်းပြည်ဟာအကောင်းဆုံးဝိုင်ကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်, ဗီယင်နာ၌တရား. ထို့အပွငျ, ခံစားရန်စပျစ်ရည်ကိုတစ်ပုလင်း Weissburgunder ကြောင်းကိုသင်သိသင့်ပါတယ်.
ဗီယင်နာ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး သြစတြီးယား နှင့်ဥရောပထဲမှာအဓိကမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်း, သငျသညျမွနျမွနျရထားရှိရလိမ့်မယ်အဓိပ္ပာယ်. ဒါဟာအများအပြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်းဗဟိုရထားလမ်းအချက်အချာဖြစ်ပါသည်.
ထိပ်တန်းအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏သိသာရွေး5ဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများဘော်ဒိုးဖြစ်ပါသည်, ပြင်သစ်
ဝိုင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သငျသညျမြား, ပြင်သစ်တွင်ဘော်ဒိုးကမ္ဘာ၏အရှိဆုံးလူသိများစပျစ်ရည်ကိုမြို့တော်တွေထဲကကြောင်းကိုငါသိ၏. ဒါကြောင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးစပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများ၏စာရင်းကိုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့်. ဒီကျော်ကြားသောဒေသအတွက်လုပ်အားလုံးစပျစ်ရည်ကိုခံစားရမည်မြို့ထဲသို့စီးဆင်း.
ဘော်ဒိုးဝိုင်သူတို့ရဲ့ဓာတ်သတ္တုနှင့်သစ်သီးမှတ်စုအဘို့အကျော်ကြားများမှာ, ဌာပနာမုအသီးကနေချိုမှည့်သောအသီးမှ. ဤရွေ့ကားဝိုင်ကောင်းကောင်းအသက်အရွယ်ရရန်အံ့သြဖွယ်စွမ်းရည်ကိုလည်းပြီ. အဆိုပါထုတ်လုပ်သူများမကြာခဏအများအပြားဆယ်စုနှစ်အသက်အရွယ်သူတို့ကိုစွန့်ခွာ.
သဘာဝကျကျ, သငျသညျဒေသ၏အကောင်းဆုံးဝိုင်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ကံဇာတာကုန်ကျကြောင်းအဟောင်းဝိုင်ကြိုးစားရန်မလိုပါ. များများရှိပါတယ် တတ်နိုင်ဝိုင် တစ်ခုခြွင်းချက်စျေးနှုန်းတန်ဖိုးအချိုးနှင့်အတူ. သင်ဒီမှာကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ထိပ်စပျစ်ရည်ကိုအနီရောင်ဘော်ဒိုးဖြစ်ပါသည်.
တမြို့သို့ရောက်ရှိပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သငျသညျအနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိပြီးနေဘယ်မှာနေပါစေ. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဘော်ဒိုးကမ်းလှမ်းမှုကိုသွားရထားလိုင်းများအများဆုံး မြန်နှုန်းမြင့်ရထား. သင်သာဘယ်နေရာမှာမဆိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတည်သော နေ့မှစ. ထိုမြို့ကိုရောက်ရှိဖို့နာရီအနည်းငယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ပဲရစ်ကနေရထားထက်လျော့နည်းအတွက်ဘော်ဒိုးရောက်ရှိ3နာရီ!
Tuscany ၏ရတနာ, လျှင်အားလုံးမဟုတ်အီတလီ၏, Florence ပြီးပြည့်စုံသောမြို့ဖြစ်၏ တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဝိုင်နှင့်အတူ. ဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများ၏စာရင်းကိုအပေါ်ဖြစ်ထိုက်ဖို့အံ့သြစရာ Sangiovese စပျစ်ရည်နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့ထုတ်လုပ်သမျှသောမြို့တဝိုက်ကျေးရွာအများအပြားရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကျေးရွာများနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အီတလီအတွင်းပိုင်းရောက်ရှိရန်ခက်ခဲ, ဒါပေမယ့် Florence မြို့မဟုတ်ပါဘူး.
သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုအီတလီနိုင်ငံကနေရထားအားဖြင့်ထိုမြို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်, ကဲ့သို့ ဆွစ်ဇာလန် နှင့်ပြင်သစ်. ပုံမှန်ရှိပါတယ်, မီလန်နှင့်ရောမမြို့ကနေနေ့တိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာသွားမြန်နှုန်းမြင့်ရထား, ဒါပေမယ့်လည်းထံမှ ဗင်းနစ်. ဒီခရီးစဉ်ကထက်နည်းနှစ်နာရီယူ, ပြီးတော့မင်းကိုတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရတယ် လှပသောတောင်ကုန်းများ နှင့်အီတလီ၏လယ်ကွင်း.
ဒါကြောင့်သင်ကဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများကိုခံစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ? SaveATrain.com သင်၌တစ်စုံတစ်ရာမြို့ရကူညီပေးပါမည် ဥရောပ, လျင်မြန်စွာ, စျေးပေါ, ကာအပြုံးနှင့်အတူ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwine-cities-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#အကောင်းဆုံးသောစပျစ်ရည် europeantravel europetravel Tranride ရထား traintip ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly ဝိုင်